Gabdho Somali-Canadian ah oo si arxan darro ah loogu dilay magaalada Ottawa ee dalka Canada – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Gabdho Somali-Canadian ah oo si arxan darro ah loogu dilay magaalada Ottawa ee dalka Canada
Waxaa magaalada Ottawa ee dalka Canada lagu dilay laba gabdhood oo walaalo ah laguna kala magacaabi jiray Nasiiba C/raxmaan iyo Asma C/raxmaan, kuwaas oo dilkooda loo adeegsaday tooreey.
Labadaan gabdhood oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Soomaaliya balse haysta dhalashada dalka Canada ayaa da’dooda lagu kala sheegay 29 jir iyo 32-jir, waxaana labadooda lagu dilay dhismaha guriga ay ka degan yihiin magaalada Ottawa ee dalka Canada.
Mid ka mid ah saaxiibada gabdhahaasi la dilay oo wareysi siisay wargeyska Ottawa Sun ayaa sheegtay inay si aad uga naxday dilka gabdhahaasi, iyadoona sheegtay inay ahaayeen dadka ugu wanaagsan oo ay abidkeeda la kulantay.
Sidoo kale, waxaa la sheegay in ciidanka booliska ay xireen nin taagnaa meel aan ka fogeyn halka gabdhahaasi lagu dilay, waxayna booliska ka gaabsadeen inay shaaciyaan magaca eedeysanahaas.
Booliska ayaa sidoo kale sheegay inay meydadka labada gabdhood ka heleen qololkii ay ku jireen, iyagoona sidoo kale xusay in dilkooda loo adeegsaday tooreey/mindi.
Inta badan Soomaalida ku nool magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa si aan caadi ahayn uga argagaxay dilka arxan daradda ah ee loo geystay labadaasi gabdhood, waxayna ku baaqeen in gacanta lagu soo dhigo kooxihii dilkaasi ka dambeeyay.
Dhinaca kale, waxaa maanta oo Axad ah lagu wadaa in gabdhahaasi salaadda Jinaasadda lagu tukaddo islamarkaana lagu aaso qabuuraha muslimiinta ee ku yaala magaalada Ottawa ee dalka Canada.